Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovaon'ny dia momba an'i Jamaika » Jamaica 'Next Big Thing' ho an'ireo mpizahatany Nizeriana
I Jamaika dia nantsoina ho “zavatra lehibe manaraka” ho an'ireo mpizahatany Nizeriana avy amin'ny minisitry ny raharaham-bahiny, Hon. Geoffrey Onyeama, taorian'ny fahatongavan'ilay sidina tsy miato voalohany avy any Nizeria ka hatrany Jamaika, izay tonga teo amin'ny Seranam-piaramanidina Iraisampirenena Sangster omaly alina (21 desambra).
"Tena antenainay ny hahita azy io (fizahan-tany) amin'ny fomba lehibe," hoy ny minisitra Onyeama, izay anisan'ireo mpandeha 140 teo amin'ny sidina voalohany, izay nidina taorinan'ny 10:00 alina ary noraisina tamina renirano jet roa namorona lalan-drano, rehefa nitanjozotra nankany amin'ny tranobe terminal ilay sambo.
Ny minisitry ny raharaham-bahiny nizeriana dia nilaza fa ao amin'io faritra maneran-tany io dia misy ny fahalalàna an'i Brezila, izay manana mponina Nizeriana marobe, saingy "mino izahay fa i Jamaika no zavatra lehibe manjo anay raha ny fizahantany no jerena."
Raha nanamarika izy fa “mpandeha be ny Nizeriana,” hoy izy “goavana amin'ny fizahan-tany sy ny fitsangantsanganana izahay.” Hoy ny minisitra Onyeama: "Mahatsapa izahay fa toeram-pitrandrahana volamena ity, vatosoa miandry ny hahitan'ny ankamaroan'ny Nizeriana ary mieritreritra aho fa raha vao hitan'ny Nizeriana ity dia ho hitanao izahay marobe." Anisan'ireo mpandeha ny mpandeha avy any Nizeria, Ghana ary Afrika Atsimo. Ny sidina mivantana iray hafa dia andrasana ao anatin'ny roa volana.
Na tsy eo tsy azo ihodivirana aza ny minisitry ny fizahantany, Hon. Edmund Bartlett dia nidera ny fahatongavan'ny sidina manan-tantara. Raha nanantitrantitra ny maha-zava-dehibe ny sidina izy dia nilaza hoe: "Ny fifandraisana ara-tantara sy ara-kolontsaina teo amin'i Nizeria sy i Jamaika dia nanomboka tamin'ny andro fanandevozana ary maro ireo Jamaikana ankehitriny no manana ny razambe ao amin'io firenena afrikanina io." Nanampy izy fa "niara-niasa izahay nitondra ity mba hahatanteraka ny fotoana kelikely ary faly aho fa nanokatra vavahady iray hafa izahay, izay manome sehatra ho an'ny fampitomboana ny sehatry ny fizahan-tany sy ny fananganana fifamatorana bebe kokoa eo amin'ny firenena roa tonta. "
Nisy solontena mahery vaika avy amin'ireo tompon'andraikitra ao amin'ny governemanta Jamaikana teo an-tanana handray ny minisitra Onyeama sy ireo mpitsidika Nizeriana hafa. Minisitry ny fitaterana sy ny harena ankibon'ny tany, Hon. Robert Montague dia nahita an'io ho fotoana manan-tantara ihany koa. "Mba handraisan'i Jamaika ny satan'ny Air Piece miaraka amina minisitra ary maherin'ny 130 ny Nizeriana manan-tantara amin'ny lafiny maro." Nieritreritra izy fa “mahatsapa tsara ny Jamaikana tokana rehetra anio hariva fa nandray ny sidina mivantana voalohany avy any Nizeria izahay. Hanomboka amin'ny zavatra tsara maro io. ”
Ny minisitra Montaque dia nanamarika ny fiaraha-miasan'ny minisitera miaraka amin'ny minisiteran'ny Fizahantany, ny raharaham-bahiny ary ny varotra ivelany, ny manampahefana eo amin'ny seranam-piaramanidina ary ny kaomisaria avaratr'i Jamaika ao Lagos, ny praiminisitra Esmond Reid, tamin'ny fanatanterahana izany.
Ny antoko fandraisana dia nahitana ihany koa ny minisitry ny raharaham-bahiny sy ny varotra ivelany, Hon. Kamina Johnson Smith; Tale mpanatanteraky ny fialan-tsasatra any Jamaika, Ramatoa Joy Roberts; Talen'ny fizahan-tany isam-paritra, Ramatoa Odette Dyer ary Lehiben'ny mpanatanteraka ao amin'ny MBJ Airports Ltd., Andriamatoa Shane Munroe.
ETOA mahita ny fizahantany Eoropeana amin'ny endrika Crisis Mode
Ny hofan-trano fialan-tsasatra Hawaii dia nidina 37% tamin'ny Novambra 2020